Orinasa miaro fanatanjahantena - Mpanamboatra fiarovana ara-panatanjahantena, China
Mamela ny hetsika feno mandritra ny fanomezana fanohanana mahafinaritra. Ny fehin-kibo fanolanana roa dia manome làlana sy fanenomana mahazatra. Ny tontolon'ny lamba dia mamoaka hafanana sy hamandoana be loatra. Namboarina ho mety tsara mba hanamaivana ny fihenan-tsasatra sy ny fihenjana. Ny mazoto mahasalama dia mitondra rivotra mangatsiaka ary manome hafanana anao, manafaingana ny fampidiran-dra mba hampiroborobo ny metabolism.